Ekwenyere m na B2B Social Media Marketing Successga nke Ọma bụ ikwubiga okwu ókè | Martech Zone
Ka anyi bido mkparịta ụka a site n’ikwu na ihe akaebe m niile bụ akụkọ. Emebeghị m nyocha ọ bụla zuru ebe niile iji gosipụta ebum pụta ụwa m; M na-aga n'ihu na ọtụtụ ndị mmadụ na-agba izu na m na ha anaghị eji usoro mgbasa ozi iji rụpụta nsonaazụ. Ha anaghị ata ahụhụ ma ọlị; ụlọ ọrụ ha na-eme ọfụma.
“Chere!”, Ị kwupụtara, “Ha nwere ike na-eme nke ọma karịa!”
Nope. Otu ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 100% YoY na ahịa asọmpi siri ike. Onweghi onye ndu ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha na-enwe usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-agbanwe agbanwe. Imirikiti ndị ndu ha na-abịa site na nzukọ ha na-aga na ụwa niile. Ha nwere n'ime ndi otu ahia nke na-agbaso ndu ndi ahu ma mee ka ha gbanwee ulo.
Azụmaahịa ọzọ wuru ọfịs ọhụụ ma na-akwado nkwado onwe ha. Ha nwere ngwaahịa ntinye nke na-enweghị asọmpi na ụlọ ọrụ Enterprise, ha na-abanyekwa ndị ahịa aka ozugbo ha nwere ike igosi ha ngosi. Kpọrọ - enweghị mgbasa ozi mmekọrịta.
Anaghị m ekwu okwu banyere nlekota maka ihe nrịba anya… Ana m ekwu Zero gbalịsie ike na usoro mgbasa ozi ha.
N'akụkụ nke ọzọ, enwere m otu ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ nke gwara m na ha anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụghị nkwalite mgbasa ozi mmekọrịta n'ihi na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. “Gịnị ọzọ ka ị nwara?”, Ka m jụrụ. "Ọ dịghị ihe, anyị ekwesịghị.", Kwuru onye nwe ya. Na-adọrọ mmasị, yabụ otu ụlọ ọrụ na-ebute nsonaazụ mgbasa ozi anaghị eme ihe ọ bụla ma ọ bụghị mgbasa ozi. Kedu ka ha si mara na ọ na-arụ ọrụ?!
Ndi ahia Bilie
Otu onye ọrụ ibe m gwara m n'oge na-adịbeghị anya na a kwụsịrị CMO ya na nso nso a mgbe ọnwa ole na ole gachara ịkọ akụkọ banyere ihe efu. Pageviews, Soro, Mmasị, na Retweets… na enweghị mmekọrịta ọ bụla na-enweta ego ọ bụla ma ọ bụ na-eto eto.
Anyị nwere ndị ahịa mere ememme mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ, na-agbakọ nnukwu ihe na-esote usoro mgbasa ozi mmekọrịta. Ha rụsiri ọrụ ike nke ukwuu itinye aka na ịzụlite netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta ha. Mana mgbe o ruru ngosi na nbudata, ọnụọgụ ahụ enweghị mmekọrịta.
Ihe omuma m na-aga n'ihu na weebụsaịtị m. Ka m na enweta ụfọdụ nibbles site na LinkedIn, Facebook na Twitter na -emepụta Zero revenue. M nwalere n'oge na-adịbeghị anya ma chụpụ ọtụtụ iri puku ndị ọzọ na-agụ iji tinye aka na njikwa Facebook. Yep .. ị chere ya. Agaghị.
Anọ Nsogbu na Social Media Marketing
Enwere nsogbu anọ na-emebi ikike anyị nwere inweta nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi metụtara:
Ebumnobi - ndị Fans gị na ndị na-eso ụzọ gị na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eso gị n'ihi na ha na-enyocha ihe ịzụta ha ọzọ na ịlele ụlọ ọrụ gị? Echere m na nke ahụ bụ obere pasent nke ndị na-ege gị ntị niile… ma nwee anụrị na-anwa ịchọpụta kpọmkwem ndị ha bụ.
Nweta - mgbanwe n'etiti netwọkụ mmekọrịta na nke gị nchịkọta juputara na oghere di iche, nke kasi uku n’ime ahia nile nke sitere na Tweet ma obu Facebook Update. Ọ gaghị ekwe omume; ọ bụ naanị ike.
Ndi oru - onye ọ bụla na-ere ahịa na-enwe mmasị ịdọrọ olulu ntụgharị gị ma gwa gị na njikọta dị mkpa n'etiti mmata na ntụgharị. Nsogbu a abụghị iwu; ọ bụ oghere dị n’etiti. Ndị ahịa jiri anya nke uche a dị jụụ ebe atụmanya gafere nzọụkwụ ikpeazụ na nke ọzọ. Eziokwu dị nnọọ iche. Ntughari di otutu kilomita site na ijikọ na mgbasa ozi. O nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji chịa ndị nwe ụlọ ikike ị nwere nke a ga-amata maka. Nke ahụ bụ ọtụtụ mgbalị na obere nlọghachi na itinye ego.
Ihe efu - ọ naghị adị gị ka ịtụnanya mgbe ị nwetara ọtụtụ narị ma ọ bụ puku echiche, mmasị, tweets, retweets, mbak ma ọ bụ ndenye ndenye? Ọ na - eme - ndị otu anyị emeela ya na mmadụ ise dị elu na mgbasa ozi mgbasa ozi anyị. N'ezie, nsogbu bụ na ọ dịghị nke metrik ahụ dugara ahịa ọ bụla. Mgbe ekwentị anaghị akụ, ndị ahịa na-enwe mmasị ịkọwa ihe metrik iji gbanwee uche.
Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịrụ ọrụ site na Enweta ego azụ n'atụmanya ahụ. Mata ebe ego gị si enweta kwesịrị ịbụ ihe kachasị mkpa gị wee na-azụ ahịa site n'aka ndị na-ajụ ase na ọwa ahụ.
Anaghị m ekwu na mgbasa ozi mmekọrịta agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ, ana m arịba ama na m na-ahụkarị ntinye azụmaahịa na atụmatụ ndị ọzọ nwere oke mbido dị elu na ntinye ego, chọrọ obere mbọ, ma dị mfe iji soro.
Anaghị m ahapụ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Aghọtara m na mmata a ma ama, mmata, ikike, na ntụkwasị obi nwere ike ị rụpụta ezigbo nsonaazụ. M na-agbasi mbọ ike na nsonaazụ mgbasa ozi na-abụkarị ikwubiga okwu ókè. Ọ bụrụ na onye ọ bụla agwa gị dị iche iche, lelee azụmahịa ebe ahụ ma nyochaa otu esi akwụ ha.
Echere m na ọ bụghị site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Tags: Attributionfacebook mgbasa oziLinkedInelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa oziTwitter
Auphonic: Kwalite Audio Podcast Gị Na Otu Pịa